အံဝင်ဂွင်ကျ – My Blog
ပထမဆုံး အသက်က ၁၃_၁၄ နှစ်ပေါ့ .. တစ်နှစ်ကျတော့ ဇာတ်လမ်းစဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလွန်ရောကျွံရော ၁၅ နှစ်ဘဲထားပါ။အဲဒီအချိန်တုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၁၅ နှစ်လို့တောင်သတိမထားမိပါဘူး။ ပြောရရင်ရတန်းကအထိကဆရာမကိုကြောက်ရ၊စာမေးပွဲကျရင်မိဘဆူခံထိမှာကြောက်ရနဲ့ယောကျၤားတို့တတ်အပ်တဲ့အတတ်ဆန်းပညာတွေကို လေ့လာသင်ကြားဖို့ အခွင့်အရေးမရခဲ့ပါဘူး။ အဲ ကျနော်က စာအုပ်တော့ကြိုက်တယ်ဗျ ..ကာတွန်းကိုမလွတ်တန်းဖတ်တယ်ဝတ္ထုတွေလည်းဖတ်တယ် .. မင်းလူတို့ တာရာမင်းဝေတို့စာအုပ်မျိုးတွေကြိုက်တယ်။ရတန်းထိတော့ တစ်နှစ်တစ်တန်းအောင်ခဲ့ပါရဲ့ .. ဖောက်တာက ၈ တန်း စတက်တဲ့နှစ်၊ ကျနော်နေတာကပဲခူးမြို့ လူလတ်တန်းစားရပ်ကွက်တစ်ခု၊အိမ်တွေကလုံးချင်းအိမ်တွေတစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကြား လူသွားလို့ရတယ်။လမ်းမကြီးကလည်းသွားလို့ရတယ်၊အိမ်ကြားလမ်းကသွားရင် များသောအားဖြင့်နောက်ဖေးပေါက်တွေ ရောက်သွားတာများတာပဲ။
ကျနော်တို့ကတော့တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကူးချင်ရင် နောက်ဖေးပေါက်ကတက်သွားလိုက်တာပဲ၊အနီးပတ်ဝန်းကျင်က ရင်းနှီးပြီးသားတွေ လည်နေကျဆိုတော့သိပ်ပြဿနာမရှိဘူး။ကျနော်အားရင် ပျင်းပျင်းရှိရင် ကာတွန်းစာအုပ်သွားသွားဖတ်တဲ့အိမ်ကတော့ မတင်တို့အိမ်ပေါ့။ သူ့ကို ကျနော်က မတင်လို့ပဲခေါ်တယ်၊သူကအမအကြီးဆုံးသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊တစ်ခါတစ်ခါသူနဲ့နေတယ်ရနှစ် ၈နှစ်လောက်ပေါ့ ..သူ့ယောကျၤားကတော့ စစ်ဗိုလ်လို့ပြောတာပဲကျနော်တို့ရပ်ကွက်ကိုပြောင်းလာတော့ ပါမလာတော့ဘူး .. တိုက်ပွဲမှာကျပြီး ဆုံးပြီပြောတာပဲ။အသက်က ၃၀ လောက်ပေါ့။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကတော့ရွေပဲ .. တင်ဆိုကားပြီးတောင့်တုန်းပဲ .. ရင်လည်းလှတယ်ခါးလည်းရှိတယ်၊ရှိတယ်ဆိုတာက သိမ်ပြီးနေတာကိုပြောတာပါ။နောက်သူ့ညီမမသန်းတဲ့ .. ပဲခူးကောလိပ်မှာ ဆရာမလုပ်တယ်အသက်က ၂၅ ဝန်းကျင်လောက်ထင်တယ်၊အပျိုကြီး ..ကိုယ်လုံးကပြည့်တယ်သူ့အမလောက်ခါးက မသိမ်ပေမယ့် ကြည့်လို့နော့ကောင်းပါတယ်။
အဲညီမအငယ်ဆုံးက ချိုချိုတဲ့ ၊၁၀ တန်းကို တတိယအကြိမ်ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်၊ကျနော့်ထက်ကြီးလှ ၅ နှစ်ပေါ့၊ရပ်ကွက်ထဲမှာ လှတဲ့စာရင်းဝင်ပါတယ်။အဲ့အချိန်လောက်ကတည်းကကျနော်သူတို့အိမ်ကိုတံခါးမရှိဓားမရှိဝင်နေထွက်နေကျ၊အဲဒီတုန်းကခလေးဆိုတော့ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး။ မတင်ရေကာတွန်းစာအုပ်ရှိလားဆိုပြီး သွားသွားဖတ်တာပဲ၊တစ်ခါတစ်ခါ မသန်းကသူအားတဲအ့ချိန်ဆိုအိမ်ရှေ့နှစ်ယောက်ထိုင် ကြိမ်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ သူ့ပေါင်ပေါ်ကျနော့်ခေါင်းတင်ပြီး နားကလော်ပေးတတ်တယ်။ငယ်သေးတော့အဲ့တုန်းကဘာစိတ်မှမရှိပါဘူး ..။ အဲ၈တန်းစတက်တော့ဆရာမလက်ကလွတ်ပြီကျွတ်ပြီဆိုပြီးအစွမ်းကုန်ကဲတော့တာပဲ၊အတန်းထဲမှာလည်းအတန်းတိုင်းကိုတဘုတ်ဘုတ်ကျပြီးတက်လာတဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့ဆုံပြီလေ၊ဒီမှာယောကျၤားတို့တတ်အပ်တဲ့အတတ်မျိုးစုံကိုသင်တော့တာပဲ၊ဆေးလိပ်သောက်တတ်လာတယ်၊ထန်းရည်သောက်တတ်လာတယ်ကျောင်းပြေးတတ်လာတယ်။
နောက်တစ်ခုကနှာကျတတ်လာတယ်ပေါ့လေကျနော့်စိတ်ထင်အဲဒီအချိန်မှာ ဂွင်းစတိုက်တတ်လာတယ်ထင်တာပဲ။ နှှာကျတတ်လာတယ်ဆိုတာကအပြာစာအုပ်ခိုးဖတ်တတ်လာတာကစတယ်လို့ပြောရမလား၊ပထမဆုံးအပြာစာအုပ်စဖတ်တဲ့အချိန်ကဆိုဘာပြောကောင်းမလဲလီးဆိုမာတောင့်နေတာပဲအလံတိုင်လားထင်ရတယ်၊ပြီးတော့မစားရ ဝခမန်း အကိုကြီးဆရာသမားတွေရဲ့ လုပ်ဇာတ်လား အမှန်အကန်လားမသိတဲ့ နှာဇာတ်လမ်းတွေ နားထောင်ဖြစ်တယ်လေ။ အဲဒီလို ယောကျၤားတို့တတ်အပ်တဲ့ပညာတွေကို ၁ နှစ်တာလေ့လာပြီးသကာလ၈ တန်းစာမေးပွဲကျပါလေရော .. ဆူမယ့်ဒဏ်ကလွတ်အောင်၂ ပတ်လောက်ကိုရင်ဝတ်ပလိုက်တယ် ..ဆူတော့ဆူခံထိတာပေါ့ပြန်ထွက်တော့ .. သက်သာတာပေါ့ ..အဲ .. မတင်တို့အိမ်ကိုလည်းအားရင်အားသလိုရောက်မြဲကာတွန်းဖတ်မြဲ.. အဲဒီမှာ နှာဘူးကျတာက ကျနော်၊ကာတွန်းဖတ်ရင်ဧည့်ခန်းက ခုံမှာထိငု်ဖတ်တယ် .. မီးဖိုချောင်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။
အကာအကွယ်မရှိဘူး .. မီးဖိုက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချက်ရတယ် .. အသားတွေလှီးတာ .. ပန်းကန်တွေဆေးတာကတော့မီးဖိုချောင်နောက်ဖက် ရေကပြင်မှာဆေးတယ်၊အဲဒီမှာ ရေလည်းချိုးတယ် .. မတင်က ဟင်းချက်ရင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချက်တယ်အစကတော့ ကျနော်လည်းမသိပါဘူး .. ကာတွန်းဖတ်ရင်းနဲ့မတင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတော့ .. ဆောင့်ကြောင့်ထိုငိုနေတဲ့ မတင်က ကျနော်နဲ့ ဘေးစောင်းအနေအထား။ ဟင်းချက်ရင်းထိုင်နေတာ အောက်စလွတ်နေတယ်လေ ..အရမ်းစောင်းမနေတော့ .. ပေါင်ရင်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးကိုမြင်နေရတယ်၊လင်းနေတော့အကုန်မြင်နေရတာပေါ့ .. အတွင်းခံဝတ်မထားဘူးကျနော့်ရင်တွေတဒိတ်ဒိတ်ခုန်ပြီးအသက်ရွုကြပ်လာသလိုပဲခံစားရတယ်။ ပထမဆုံးအရှင်လတ်လတ်မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ပေါင်ရင်းအတွင်းသားကို စမြင်ဖူးတာ .. အခုတောင်ဒီစာကိုရေးရင်းအဲ့ဖီလင် ပြန်ခံစားရသလိုပဲ .. မတင်ကတော့ဘာမှသတိထားမိပါဘူးခဏကြာတော့။
သူနေရာရွေ့တော့ ပေါင်နဲ့ခြေသလုံးညှပ်နေတဲ့ထဘီကိုဆွဲတင်လိုက်တော့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတုန်းမီးပျက်သွားသလိုပဲ ..။ အဲ့လိုမြင်ဖူးပြီးသကာလ နောက်ဆိုသူဟင်းချက်တဲ့အချိန်တိုင်းရုပ်ရှင်သွားသွားကြည့်တာ ၃၊၄လလောက်မှာဘယ်တော့မှအတွင်းခံမပါဘူး..တစ်ခါတစ်ခါသူ့အမွေးမဲမဲတွေဖုံးနေတဲ့ ပြကွက်ကောင်းကောင်းလည်းတွေ့တာပဲ .. ပြီးရင် အိမ်ပြန်ပြီး အိမ်သာထဲဝင်ဂွင်းတိုက်ရတာအမောပါပဲ အဲ ဖြစ်ချင်တော့တစ်နေ့ ..နေ့ခင်းပိုင်းလောက် သူ့အိမ်ရောက်သွားတယ်။ထုံးစံအတိုင်းအိမ်မှာမတင်တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်၊ကျနော်လည်း အိမ်ရှေ့ခုံမှာထိုင်ပြီးစားပွဲပေါ်ကကာတွန်းစာအုပ် ဆွဲဖတ်နေလိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ မတင်က ဟဲ့ ငဇော် မတင်ကို မီးသီးလဲပေးမလားမတင်မမှီလို့”ဆိုတော့အင်း အင်း ရတယ် မတင် ဘယ်ဟာလဲ”ဆိုပြီးစာအုပ်ကိုချပြီး မတင်ရှိရာမီးဖိုဘက်ကိုလာခဲ့တယ် .. ပြောပြီးပြီလားမသိဘူး .. ကျနော့်ကိုတစ်ရပ်ကွက်လုံးက ငဇော်လို့ပဲခေါ်ကြတယ်အိမ်ကလည်းအဲလိုပဲခေါ်တယ်ကြည့်လိုက်တော့။
မီးဖိုခန်းမီးလုံး အိမ်ကနည်းနည်းမြင့်တော့။ တော်ရုံမမှီဘူး .. ကျနော်လည်းမမှီဘူး .. ဒါနဲ့အိမ်ရှေ့ကကုလားထိုင်ယူပြီးတက်ကြည့်တယ် .. မမှီသေးဘူး . အဲ့ဒီကုလားထိုင်ပေါ် ခွေးခြေအပုလေးထပ်တင်ပြီး မတင် ကိုင်ထားပေးဦးဆိုပြီး ကုလားထိုင်ပေါ်ကနေ ခွေးခြေအပုလေးပေါ်လှမ်းတက်လိုက်တယ် .. မတင်ကကျနော့်ရှေ့ကရပ်ပြီးကျနော့်ရှပ်အကျႌ(ဘိုက်သားနားက)ကိုကိုင်ထားတယ်။ ကျနော့်ငပဲကမတင်မျက်နှာနဲ့ တစ်တန်းတည်း ..အဲ့ မမှီတမှီခြေဖျားထောက်လိုက်တော့မှီသွားတယ်၊မီးလုံးကမီးကြိုးနဲ့တွဲလောင်းကျနေတာဆိုတော့ လက်တစ်ဖက်က မီးလုံးတပ်ထားတဲ့အုံကိုကိုင်၊တစ်ဖက်က မီးလုံးကိုလှည့်ဖြုတ်ရတယ်လေ။ “ဟဲ့ လဲတတ်ရဲ့လား”လို့ မတင်ကလှမ်းမေးတော့ ..လဲတတ်ပါတယ် မတင်ရဲ့”လို့ လှမ်းအဖြေ ဗြုန်းဆိုကျနော့်ပုဆိုးကဂွင်းလုံးကျွတ်ကျပါလေရော .. ခြေဖျားအထောက်၊စကားလှမ်းအပြောမီးလုံးကိုအားစိုက်အလှည့် ဘိုက်သားကချပ်သွားတယ်နဲ့တူပါရဲ့။
ကံကောင်းချင်တော့ အတွင်းခံဘောင်းဘီက ပါမလာဘူးဗျာ ..ပါရင်ဇာတ်လမ်းက ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာ ..ကျနော့်လီးကမတင်မျက်နှာရှေ့မှာ တန်းလန်းကြီး ..ပြောရဦးမယ်ကျနော့်ငပဲအကြောင်း..အဲဒါလျိုှ့ဝှက်ချက်။ တော်ရုံလူမသိဘူး .. ကျနော်ကဗမာလူမျိုး ဒါပေမယ့် မေမေပြောတော့ကျနော်မွေးတုန်းက သားရေကရှည်နေပြီး ရွုရွုမထွက်လို့ သားရေကိုဖြတ်လိုက်ရတယ်ပြောတယ် ..ငယ်ငယ်လေးကတည်းကဒစ်ကလန်နေတယ် .. ဒီအတိုင်း မတောင်သေးတာတောင် ဒစ်ကပေါ်နေတယ်အဲ အဲ မတင် လုံချည်ကျွတ်ပီ”ခွေးခြေပေါ် ရပ်ရက် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ .. မတင်က ကျနော့်လုံချည်ကူကောက်ပေးပါရဲ့ ..ဖြစ်ချင်တော့ ခွေးခြေခုံနဲ့ ညိပြီး တော်ရုံဆွဲတင်မရ ဖြစ်နေတယ်။ မတင်တော့ ကျနော့်ငပဲကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သွားရှာတယ် .. ရှက်လိုက်တာ အဲ့တုန်းကလဲပြီးအိမ်ရှေ့ခုံပေါ်ပြန်အထိုင် မတင်ကလိုက်လာပြီး ကျနော့်ဘေးဝင်ထိုင်တယ် .. ထိုင်နေတာက နှစ်ယောက်ထိုင် ခုံ ..ဟဲ့ ငဇော် ပြစမ်း .. ။
မင်းဟာကလူကြီးလိုပဲဆိုပြီး ကျနော့်ပုဆိုးချည်ထားတဲ့နေရာကိုလှမ်းဖြေတော့ ..အာ မတင်ကလည်း”ဆိုပြီး သူ့လက်ကိုလှမ်းတားလိုက်တာမမှီလိုက်ဘူး ..”နေစမ်းပါ ငဇော်ရယ် ..ငါကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးကျနော့်လီးကို လှမ်းကိုင်ကြည့်တယ်၊ပထမတော့လက်ချောင်းလေးနဲ့လီးတံကို ကိုင်ကြည့်တယ်။ နောက်ဒစ်ပေါ်နေပေမယ့် သားရေကိုအောက်ကိုဆွဲကြည့်တယ်၊ပြီးရင် အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲစုကြည့်တယ်၊အဲ့လု ၃၊၄ခါလောက်မတင်ကလုပ်တော့ကျနော့်လီးက ထောင်လာပါလေရော..ငဇော်ရယ်..နင့်ကိုငါခလေးမှတ်နေတာခုတော့ကြည့်စမ်းပါဦးဆိုပြီးကျနော့နားပိုကပ်ြီပီးကျနော့်လီးကိုသေချာဆုပ်ပြီးဂွင်းတိုက်ပေးနေလေရဲ့ကောင်းလိုက်တာနောိ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုက်တာနဲ့ တခြားစီပဲသူ့လက်နဲ့ဆုပ်လိုက်ကတည်းက အရသာကအပြည့်အဝ တက်နေပီ ..။ တိုက်နေတာကလည်းရွရွလေး၊တစ်ခါတစ်ခါ ဥလေးတွေကိုလည်း ပွတ်ပွတ်ပေးရဲ့ ကျနော်လည်းမတင်ကိုမှီပြီးဖီလင်တက်နေလေရဲ့ ….။
အဲဒီမှာမတင်ကကျနော့်လက်ကိုဆွဲပြီး သူ့ပေါင်ကြားမှာ နေရာချပေးတယ်ဟင့်အင်း ထဘီပေါ်ကမဟုတ်ဘူး .. သူ့ထဘီကို ဘယ်တုန်းကဖြည်လိုက်တယ်မသိလိုက်ဘူး .. ချပေးတဲ့နေရာက အမွေးကြမ်းတွေ ပေါ်မှာကျနော်လည်းအလိုအလျောက်လားဘာလားတော့မသိဘူးသူ့အဖုတ်လေးကိုပွတ်ပေးနေမိတယ် .. ကုလားထိုင်ပေါ်မှာသူကကိုယ့်လီးကို ကိုင်ကစား၊ကိုယ်က သူ့အဖုတ်ကိုပွတ်နဲ့၂ ယောက်သားဘာစကားမှမပြောနိုင်ဘဲ ဖီးလ်တက်နေကြတာ။ ပွတ်လို့ကလည်း ကောင်းလိုက်တာ .. ကောင်းဆိုသူကလည်းအလိုက်တသိနဲ့ကားထားပေးတာကိုး .. အရည်တွေဆို လက်မှာချွဲကျိနေတာပဲ ..အမှန်က ဒီနေရာမှာ ဘာဂျာတွေဘာတွေအပြီအပြင်ဆွဲပစ်ရမှာ ..အခုနေများ အဲ့အခွင့်အရေးပြန်ရလို့ကတော့ .မတင် နတ်ပြည်ရောက်တာထက်တောင် ကောင်းသွားနိုင်တယ် ခဏလေးနေတော့ လာ ငဇော်ဆိုပြီး အခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ်အခန်းထဲရောက်တော့ ကုတင်မှာသူက ကန့်လန့်လှဲချလိုက်တယ်။
ထဘီမရှိတော့ဘူးနော် ..ကျနော်လည်းအခန်းထဲရောက်ကတည်းကလုံချည်မရှိတော့ဘူး .. ပြီးတော့သူ့ခြေထောက် ၂ ချောင်းကိုထောင်လိုက်တော့ အဖုတ်ကအပေါ်တက်လာတယ်ကျနော်လည်းသူ့ခြေထောက် ၂ ချောင်းကြားမှာ ရပ်လိုက်တော့ ကျနော့်လီးက သူ့အဖုတ်နဲ့တန်းနေတာပဲ .. သူက လီးကိုကိုင်ပြီးအပေါက်ဝတေ့ပေးတော့ ..ကျနော်လည်းထိုးချလိုက်တယ် .ရလွတ်ဆိုပြီးအရည်တွေရွဲနေတဲ့သူ့အဖုတ်ထဲကိုကျနော့်လီးကတစ်ဆုံးဝင်သွားတာပဲအားကောင်းလိုက်တာ ငဇော်ရယ်ဆိုပြီးမတင်မျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်ကိုကျနော်ဘယ်လိုရေးပြရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး။ အင်း သူ လီးငတ်နေတာ တော်တော်ကြာပြီဆိုတာ ကျနော်ပြောရဲတယ်ကျနော်လား ..ဝိုးးးး ဘယ်လိုပြောရမလဲ ခင်ဗျားတို့ချောကလက်စားဖူးလား အင်မတန်ချိုဆိမ့်မွေးကြိုင်နေတဲ့ ချောကလက်ကိုပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခံစားလိုက်ရတဲ့အရသာလေတကယ်ပြောတာ ဒီထက်ကောင်းတယ် အရသာကပါးစပ်ထဲမှာမရှိဘူး …..။
ကျနော့်လီးက အလွန်တရာနူးညံ့တယ်လို့ထင်ရတဲ့အပေါက်ထဲကို အံဝင်ခွင်ကျဝင်နေတဲ့ အရသာဟာ လီးကနေတစ်ဆင့်။ ဦးနှောက်ဆီရောက်လာတော့ ဦးနှောက် ဘာအရသာလဲဆိုတာရုတ်တရက်နာမည်ပေးဖို့ မတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် .. ကောင်းတာထက်ပိုကောင်းတယ်. ပိုကောင်းတာထက်သာလွန်တယ်လို့နာမည်တပ်လိုက်ပြီးအရသာနောက်ကို လူရော ဦးနှောက်ပါ မျောပါသွားတော့တာပဲသဘာဝအရအလိုအလျှောက်ပါပဲ အဆုံးထိဝင်သွားတော့ ဖြေးဖြေးလေးပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် .. ရင်ထဲဟာသွားသလိုပဲ ဒါနဲ့ ကမန်းကတန်းပြန်သွင်းလိုက်တယ်၊ပြန်ဟာသွားတယ် ပြန့သွင်းလိုက်တယ် အဲပြန်ကောင်းသွားပြန်ရော ..အဲလိုလေး ၁၀ ချက်လောက်လုပ်လိုက်တော့မတင်က။ “အင်း အင်း ငဇော် ဆောင့် ဆောင့် ..မတင်ကိုဆောင့်ပေး”ဆိုပြီးကျနော့်ဘိက်ကိုအတင်းဆွဲတော့။
ကျနော်လည်းသာသာလေးဆွဲထုတ်လိုက်သာသာလေးထိုးသွင်းလိုက်နဲ့ကျနော့်လီးကမတင်စောက်ဖုတ်ထဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက် …ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမတင်ဆီက အင်းဆိုပြီးထွက်လာတဲ့သာသာယာယာတိုးတိးတိတ်တိတ်အသံဟာကျနော့်နားထဲမှာ မေဆွိအသံထက်ပိုနားထောင်ကောင်းနေသလိုလို .. မတင်က တအင်းအင်းနဲ့။ ကျနော်ထိုးသွင်းတိုင်း အင်း တစ်လုံးက ပါးစပ်ကထွက်ထွက်လာတယ်ခဏနေတော့ ..”ဆောင့်ဆောင့် ငဇော် မြန်မြန်ဆောင့်မတင်ပြီးတော့မယ် ….. မြန်မြန်ဆောင့်လိုး”ဆိုတော့ ကျနော်လည်းအရှိန်မြှင့်အဆောင့်သူကလည်းအပြီး ကျနော်လာ်းအပြီး အချိန်ကိုက်ပဲ.. ပြီးတော့သူက….. ကျနော့်လက်ကိုဆွဲပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ဆွဲချပြီးသာ့ခြေထောက် ၂ ချောင်းကကျနော့်ခါးကိုအတင်းခွထားတာပါပဲ .. ကောင်းလိုက်တာဗျာပထမဆုံးအကြိမ် လိုးဖူးခြင်းပါဘဲ ….. ပြီ
က်ေနာ္တို႔ကေတာ့တစ္အိမ္နဲ႔တစ္အိမ္ကူးခ်င္ရင္ ေနာက္ေဖးေပါက္ကတက္သြားလိုက္တာပဲ၊အနီးပတ္ဝန္းက်င္က ရင္းႏီွးၿပီးသားေတြ လည္ေနက်ဆိုေတာ့သိပ္ျပႆနာမရိွဘူး။က်ေနာ္အားရင္ ပ်င္းပ်င္းရိွရင္ ကာတြန္းစာအုပ္သြားသြားဖတ္တဲ့အိမ္ကေတာ့ မတင္တို႔အိမ္ေပါ့။ သူ႔ကို က်ေနာ္က မတင္လို႔ပဲေခၚတယ္၊သူကအမအႀကီးဆုံးသမီးေလးတစ္ေယာက္ရိွတယ္၊တစ္ခါတစ္ခါသူနဲ႔ေနတယ္ရႏွစ္ ၈ႏွစ္ေလာက္ေပါ့ ..သူ႔ေယာက်ၤားကေတာ့ စစ္ဗိုလ္လို႔ေျပာတာပဲက်ေနာ္တို႔ရပ္ကြက္ကိုေျပာင္းလာေတာ့ ပါမလာေတာ့ဘူး .. တိုက္ပြဲမွာက်ၿပီး ဆုံးၿပီေျပာတာပဲ။အသက္က ၃၀ ေလာက္ေပါ့။ ကိုယ္လုံးကိုယ္ေပါက္ကေတာ့ေ႐ြြပဲ .. တင္ဆိုကားၿပီးေတာင့္တုန္းပဲ .. ရင္လည္းလွတယ္ခါးလည္းရိွတယ္၊ရိွတယ္ဆိုတာက သိမ္ၿပီးေနတာကိုေျပာတာပါ။ေနာက္သူ႔ညီမမသန္းတဲ့ .. ပဲခူးေကာလိပ္မွာ ဆရာမလုပ္တယ္အသက္က ၂၅ ဝန္းက်င္ေလာက္ထင္တယ္၊အပ်ိဳႀကီး ..ကိုယ္လုံးကျပည့္တယ္သူ႔အမေလာက္ခါးက မသိမ္ေပမယ့္ ၾကည့္လို႔ေနာ့ေကာင္းပါတယ္။
အဲညီမအငယ္ဆုံးက ခ်ိဳခ်ိဳတဲ့ ၊၁၀ တန္းကို တတိယအႀကိမ္ေျဖဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္၊က်ေနာ့္ထက္ႀကီးလွ ၅ ႏွစ္ေပါ့၊ရပ္ကြက္ထဲမွာ လွတဲ့စာရင္းဝင္ပါတယ္။အဲ့အခ်ိန္ေလာက္ကတည္းကက်ေနာ္သူတို႔အိမ္ကိုတံခါးမရိွဓားမရိွဝင္ေနထြက္ေနက်၊အဲဒီတုန္းကခေလးဆိုေတာ့ ဘာျပႆနာမွ မရိွပါဘူး။ မတင္ေရကာတြန္းစာအုပ္ရိွလားဆိုၿပီး သြားသြားဖတ္တာပဲ၊တစ္ခါတစ္ခါ မသန္းကသူအားတဲအ့ခ်ိန္ဆိုအိမ္ေရွ႕ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ ႀကိမ္ကုလားထိုင္ေပၚမွာ သူ႔ေပါင္ေပၚက်ေနာ့္ေခါင္းတင္ၿပီး နားကေလာ္ေပးတတ္တယ္။ငယ္ေသးေတာ့အဲ့တုန္းကဘာစိတ္မွမရိွပါဘူး ..။ အဲ၈တန္းစတက္ေတာ့ဆရာမလက္ကလြတ္ၿပီကြၽတ္ၿပီဆိုၿပီးအစြမ္းကုန္ကဲေတာ့တာပဲ၊အတန္းထဲမွာလည္းအတန္းတိုင္းကိုတဘုတ္ဘုတ္က်ၿပီးတက္လာတဲ့ဆရာသမားေတြနဲ႔ဆုံၿပီေလ၊ဒီမွာေယာက်ၤားတို႔တတ္အပ္တဲ့အတတ္မ်ိဳးစုံကိုသင္ေတာ့တာပဲ၊ေဆးလိပ္ေသာက္တတ္လာတယ္၊ထန္းရည္ေသာက္တတ္လာတယ္ေက်ာင္းေျပးတတ္လာတယ္။
ေနာက္တစ္ခုကႏွာက်တတ္လာတယ္ေပါ့ေလက်ေနာ့္စိတ္ထင္အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂြင္းစတိုက္တတ္လာတယ္ထင္တာပဲ။ ႏွွာက်တတ္လာတယ္ဆိုတာကအျပာစာအုပ္ခိုးဖတ္တတ္လာတာကစတယ္လို႔ေျပာရမလား၊ပထမဆုံးအျပာစာအုပ္စဖတ္တဲ့အခ်ိန္ကဆိုဘာေျပာေကာင္းမလဲလီးဆိုမာေတာင့္ေနတာပဲအလံတိုင္လားထင္ရတယ္၊ၿပီးေတာ့မစားရ ဝခမန္း အကိုႀကီးဆရာသမားေတြရဲ႕ လုပ္ဇာတ္လား အမွန္အကန္လားမသိတဲ့ ႏွာဇာတ္လမ္းေတြ နားေထာင္ျဖစ္တယ္ေလ။ အဲဒီလို ေယာက်ၤားတို႔တတ္အပ္တဲ့ပညာေတြကို ၁ ႏွစ္တာေလ့လာၿပီးသကာလ၈ တန္းစာေမးပြဲက်ပါေလေရာ .. ဆူမယ့္ဒဏ္ကလြတ္ေအာင္၂ ပတ္ေလာက္ကိုရင္ဝတ္ပလိုက္တယ္ ..ဆူေတာ့ဆူခံထိတာေပါ့ျပန္ထြက္ေတာ့ .. သက္သာတာေပါ့ ..အဲ .. မတင္တို႔အိမ္ကိုလည္းအားရင္အားသလိုေရာက္ၿမဲကာတြန္းဖတ္ၿမဲ.. အဲဒီမွာ ႏွာဘူးက်တာက က်ေနာ္၊ကာတြန္းဖတ္ရင္ဧည့္ခန္းက ခုံမွာထိငု္ဖတ္တယ္ .. မီးဖိုေခ်ာင္ကိုလွမ္းျမင္ရတယ္။
အကာအကြယ္မရိွဘူး .. မီးဖိုက ၾကမ္းျပင္ေပၚမွာ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ခ်က္ရတယ္ .. အသားေတြလွီးတာ .. ပန္းကန္ေတြေဆးတာကေတာ့မီးဖိုေခ်ာင္ေနာက္ဖက္ ေရကျပင္မွာေဆးတယ္၊အဲဒီမွာ ေရလည္းခ်ိဳးတယ္ .. မတင္က ဟင္းခ်က္ရင္ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ခ်က္တယ္အစကေတာ့ က်ေနာ္လည္းမသိပါဘူး .. ကာတြနး္ဖတ္ရင္းနဲ႔မတင္ကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္မိေတာ့ .. ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ို္ေနတဲ့ မတင္က က်ေနာ္နဲ႔ ေဘးေစာင္းအေနအထား။ ဟင္းခ်က္ရင္းထိုင္ေနတာ ေအာက္စလြတ္ေနတယ္ေလ ..အရမ္းေစာင္းမေနေတာ့ .. ေပါင္ရင္းျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးႀကီးကိုျမင္ေနရတယ္၊လင္းေနေတာ့အကုန္ျမင္ေနရတာေပါ့ .. အတြင္းခံဝတ္မထားဘူးက်ေနာ့္ရင္ေတြတဒိတ္ဒိတ္ခုန္ၿပီးအသက္႐ြဳၾကပ္လာသလိုပဲခံစားရတယ္။ ပထမဆုံးအရွင္လတ္လတ္မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ေပါင္ရင္းအတြင္းသားကို စျမင္ဖူးတာ .. အခုေတာင္ဒီစာကိုေရးရင္းအဲ့ဖီလင္ ျပန္ခံစားရသလိုပဲ .. မတင္ကေတာ့ဘာမွသတိထားမိပါဘူးခဏၾကာေတာ့။
သူေနရာေ႐ြြ႕ေတာ့ ေပါင္နဲ႔ေျခသလုံးညႇပ္ေနတဲ့ထဘီကိုဆြဲတင္လိုက္ေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ေကာင္းတုန္းမီးပ်က္သြားသလိုပဲ ..။ အဲ့လိုျမင္ဖူးၿပီးသကာလ ေနာက္ဆိုသူဟင္းခ်က္တဲ့အခ်ိန္တိုင္း႐ုပ္ရွင္သြားသြားၾကည့္တာ ၃၊၄လေလာက္မွာဘယ္ေတာ့မွအတြင္းခံမပါဘူး..တစ္ခါတစ္ခါသူ႔အေမြြးမဲမဲေတြဖုံးေနတဲ့ ျပကြက္ေကာင္းေကာင္းလည္းေတြ႕တာပဲ .. ၿပီးရင္ အိမ္ျပန္ၿပီး အိမ္သာထဲဝင္ဂြင္းတိုက္ရတာအေမာပါပဲ အဲ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့တစ္ေန႔ ..ေန႔ခင္းပိုင္းေလာက္ သူ႔အိမ္ေရာက္သြားတယ္။ထုံးစံအတိုင္းအိမ္မွာမတင္တစ္ေယာက္ပဲ ရိွတယ္၊က်ေနာ္လည္း အိမ္ေရွ႔ခုံမွာထိုင္ၿပီးစားပြဲေပၚကကာတြန္းစာအုပ္ ဆြဲဖတ္ေနလိုက္တယ္။ ခဏၾကာေတာ့ မတင္က ဟဲ့ ငေဇာ္ မတင္ကို မီးသီးလဲေပးမလားမတင္မမွီလို႔”ဆိုေတာ့အင္း အင္း ရတယ္ မတင္ ဘယ္ဟာလဲ”ဆိုၿပီးစာအုပ္ကိုခ်ၿပီး မတင္ရိွရာမီးဖိုဘက္ကိုလာခဲ့တယ္ .. ေျပာၿပီးၿပီလားမသိဘူး .. က်ေနာ့္ကိုတစ္ရပ္ကြက္လုံးက ငေဇာ္လို႔ပဲေခၚၾကတယ္အိမ္ကလည္းအဲလိုပဲေခၚတယ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့။
မီးဖိုခန္းမီးလုံး အိမ္ကနည္းနည္းျမင့္ေတာ့။ ေတာ္႐ုံမမွီဘူး .. က်ေနာ္လည္းမမွီဘူး .. ဒါနဲ႔အိမ္ေရွ႕ကကုလားထိုင္ယူၿပီးတက္ၾကည့္တယ္ .. မမွီေသးဘူး . အဲ့ဒီကုလားထိုင္ေပၚ ေခြးေျခအပုေလးထပ္တင္ၿပီး မတင္ ကိုင္ထားေပးဦးဆိုၿပီး ကုလားထိုင္ေပၚကေန ေခြးေျခအပုေလးေပၚလွမ္းတက္လိုက္တယ္ .. မတင္ကက်ေနာ့္ေရွ႕ကရပ္ၿပီးက်ေနာ့္ရွပ္အက်ႌ(ဘိုက္သားနားက)ကိုကိုင္ထားတယ္။ က်ေနာ့္ငပဲကမတင္မ်က္ႏွာနဲ႔ တစ္တန္းတည္း ..အဲ့ မမွီတမွီေျခဖ်ားေထာက္လိုက္ေတာ့မွီသြားတယ္၊မီးလုံးကမီးႀကိဳးနဲ႔တြဲေလာင္းက်ေနတာဆိုေတာ့ လက္တစ္ဖက္က မီးလုံးတပ္ထားတဲ့အုံကိုကိုင္၊တစ္ဖက္က မီးလုံးကိုလွည့္ျဖဳတ္ရတယ္ေလ။ “ဟဲ့ လဲတတ္ရဲ႕လား”လို႔ မတင္ကလွမ္းေမးေတာ့ ..လဲတတ္ပါတယ္ မတင္ရဲ႕”လို႔ လွမ္းအေျဖ ျဗဳန္းဆိုက်ေနာ့္ပုဆိုးကဂြင္းလုံးကြၽတ္က်ပါေလေရာ .. ေျခဖ်ားအေထာက္၊စကားလွမ္းအေျပာမီးလုံးကိုအားစိုက္အလွည့္ ဘိုက္သားကခ်ပ္သြားတယ္နဲ႔တူပါရဲ႕။
ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အတြင္းခံေဘာင္းဘီက ပါမလာဘူးဗ်ာ ..ပါရင္ဇာတ္လမ္းက ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မွာ ..က်ေနာ့္လီးကမတင္မ်က္ႏွာေရွ႕မွာ တန္းလန္းႀကီး ..ေျပာရဦးမယ္က်ေနာ့္ငပဲအေၾကာင္း..အဲဒါလ်ိဳွ႔ဝွက္ခ်က္။ ေတာ္႐ုံလူမသိဘူး .. က်ေနာ္ကဗမာလူမ်ိဳး ဒါေပမယ့္ ေမေမေျပာေတာ့က်ေနာ္ေမြးတုန္းက သားေရကရွည္ေနၿပီး ႐ြဳ႐ြဳမထြက္လို႔ သားေရကိုျဖတ္လိုက္ရတယ္ေျပာတယ္ ..ငယ္ငယ္ေလးကတည္းကဒစ္ကလန္ေနတယ္ .. ဒီအတိုင္း မေတာင္ေသးတာေတာင္ ဒစ္ကေပၚေနတယ္အဲ အဲ မတင္ လုံခ်ည္ကြၽတ္ပီ”ေခြးေျခေပၚ ရပ္ရက္ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ .. မတင္က က်ေနာ့္လုံခ်ည္ကူေကာက္ေပးပါရဲ႕ ..ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ေခြးေျခခုံနဲ႔ ညိၿပီး ေတာ္႐ုံဆြဲတင္မရ ျဖစ္ေနတယ္။ မတင္ေတာ့ က်ေနာ့္ငပဲကိုကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းျမင္သြားရွာတယ္ .. ရွက္လိုက္တာ အဲ့တုန္းကလဲၿပီးအိမ္ေရွ႕ခုံေပၚျပန္အထိုင္ မတင္ကလိုက္လာၿပီး က်ေနာ့္ေဘးဝင္ထိုင္တယ္ .. ထိုင္ေနတာက ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ ခုံ ..ဟဲ့ ငေဇာ္ ျပစမ္း .. ။
မင္းဟာကလူႀကီးလိုပဲဆိုၿပီး က်ေနာ့္ပုဆိုးခ်ည္ထားတဲ့ေနရာကိုလွမ္းေျဖေတာ့ ..အာ မတင္ကလည္း”ဆိုၿပီး သူ႔လက္ကိုလွမ္းတားလိုက္တာမမွီလိုက္ဘူး ..”ေနစမ္းပါ ငေဇာ္ရယ္ ..ငါၾကည့္ဦးမယ္ဆိုၿပီးက်ေနာ့္လီးကို လွမ္းကိုင္ၾကည့္တယ္၊ပထမေတာ့လက္ေခ်ာင္းေလးနဲ႔လီးတံကို ကိုင္ၾကည့္တယ္။ ေနာက္ဒစ္ေပၚေနေပမယ့္ သားေရကိုေအာက္ကိုဆြဲၾကည့္တယ္၊ၿပီးရင္ အေပၚကိုျပန္ဆြဲစုၾကည့္တယ္၊အဲ့လု ၃၊၄ခါေလာက္မတင္ကလုပ္ေတာ့က်ေနာ့္လီးက ေထာင္လာပါေလေရာ..ငေဇာ္ရယ္..နင့္ကိုငါခေလးမွတ္ေနတာခုေတာ့ၾကည့္စမ္းပါဦးဆိုၿပီးက်ေနာ့နားပိုကပ္ျီပီးက်ေနာ့္လီးကိုေသခ်ာဆုပ္ၿပီးဂြင္းတိုက္ေပးေနေလရဲ႕ေကာင္းလိုက္တာေနာိ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဆိုက္တာနဲ႔ တျခားစီပဲသူ႔လက္နဲ႔ဆုပ္လိုက္ကတည္းက အရသာကအျပည့့္္အဝ တက္ေနပီ ..။ တိုက္ေနတာကလည္း႐ြ႐ြေလး၊တစ္ခါတစ္ခါ ဥေလးေတြကိုလည္း ပြတ္ပြတ္ေပးရဲ႕ က်ေနာ္လည္းမတင္ကိုမွီၿပီးဖီလင္တက္ေနေလရဲ႕ ….။
အဲဒီမွာမတင္ကက်ေနာ့္လက္ကိုဆြဲၿပီး သူ႔ေပါင္ၾကားမွာ ေနရာခ်ေပးတယ္ဟင့္အင္း ထဘီေပၚကမဟုတ္ဘူး .. သူ႔ထဘီကို ဘယ္တုန္းကျဖည္လိုက္တယ္မသိလိုက္ဘူး .. ခ်ေပးတဲ့ေနရာက အေမြြးၾကမ္းေတြ ေပၚမွာက်ေနာ္လည္းအလိုအေလ်ာက္လားဘာလားေတာ့မသိဘူးသူ႔အဖုတ္ေလးကိုပြတ္္ေပးေနမိတယ္ .. ကုလားထိုင္ေပၚမွာသူကကိုယ့္လီးကို ကိုင္ကစား၊ကိုယ္က သူ႔အဖုတ္ကိုပြတ္နဲ႔၂ ေယာက္သားဘာစကားမွမေျပာႏိုင္ဘဲ ဖီးလ္တက္ေနၾကတာ။ ပြတ္လို႔ကလည္း ေကာင္းလိုက္တာ .. ေကာင္းဆိုသူကလည္းအလိုက္တသိနဲ႔ကားထားေပးတာကိုး .. အရည္ေတြဆို လက္မွာခြၽဲက်ိေနတာပဲ ..အမွန္က ဒီေနရာမွာ ဘာဂ်ာေတြဘာေတြအၿပီအျပင္ဆြဲပစ္ရမွာ ..အခုေနမ်ား အဲ့အခြင့္အေရးျပန္ရလို႔ကေတာ့ .မတင္ နတ္ျပည္ေရာက္တာထက္ေတာင္ ေကာင္းသြားႏိုင္တယ္ ခဏေလးေနေတာ့ လာ ငေဇာ္ဆိုၿပီး အခန္းထဲ ေခၚသြားတယ္အခန္းထဲေရာက္ေတာ့ ကုတင္မွာသူက ကန႔္လန႔္လွဲခ်လိုက္တယ္။
ထဘီမရိွေတာ့ဘူးေနာ္ ..က်ေနာ္လည္းအခန္းထဲေရာက္ကတည္းကလုံခ်ည္မရိွေတာ့ဘူး .. ၿပီးေတာ့သူ႔ေျခေထာက္ ၂ ေခ်ာင္းကိုေထာင္လိုက္ေတာ့ အဖုတ္ကအေပၚတက္လာတယ္က်ေနာ္လည္းသူ႔ေျခေထာက္ ၂ ေခ်ာင္းၾကားမွာ ရပ္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ့္လီးက သူ႔အဖုတ္နဲ႔တန္းေနတာပဲ .. သူက လီးကိုကိုင္ၿပီးအေပါက္ဝေတ့ေပးေတာ့ ..က်ေနာ္လည္းထိုးခ်လိုက္တယ္ .ရလြတ္ဆိုၿပီးအရည္ေတြ႐ြြဲေနတဲ့သူ႔အဖုတ္ထဲကိုက်ေနာ့္လီးကတစ္ဆုံးဝင္သြားတာပဲအားေကာင္းလိုက္တာ ငေဇာ္ရယ္ဆိုၿပီးမတင္မ်က္ႏွာမွာေပၚလာတဲ့ခံစားခ်က္ကိုက်ေနာ္ဘယ္လိုေရးျပရမွန္းေတာင္မသိေတာ့ပါဘူး။ အင္း သူ လီးငတ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီဆိုတာ က်ေနာ္ေျပာရဲတယ္က်ေနာ္လား ..ဝိုးးးး ဘယ္လိုေျပာရမလဲ ခင္ဗ်ားတို႔ေခ်ာကလက္စားဖူးလား အင္မတန္ခ်ိဳဆိမ့္ေမြြးႀကိဳင္ေနတဲ့ ေခ်ာကလက္ကိုပါးစပ္ထဲထည့္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာခံစားလိုက္ရတဲ့အရသာေလတကယ္ေျပာတာ ဒီထက္ေကာင္းတယ္ အရသာကပါးစပ္ထဲမွာမရိွဘူး …..။
က်ေနာ့္လီးက အလြန္တရာႏူးညံ့တယ္လို႔ထင္ရတဲ့အေပါက္ထဲကို အံဝင္ခြင္က်ဝင္ေနတဲ့ အရသာဟာ လီးကေနတစ္ဆင့္။ ဦးေနွာက္ဆီေရာက္လာေတာ့ ဦးေနွာက္ ဘာအရသာလဲဆိုတာ႐ုတ္တရက္နာမည္ေပးဖို႔ မတတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ .. ေကာင္းတာထက္ပိုေကာင္းတယ္. ပိုေကာင္းတာထက္သာလြန္တယ္လို႔နာမည္တပ္လိုက္ၿပီးအရသာေနာက္ကို လူေရာ ဦးေနွာက္ပါ ေမ်ာပါသြားေတာ့တာပဲသဘာဝအရအလိုအေလွ်ာက္ပါပဲ အဆုံးထိဝင္သြားေတာ့ ေျဖးေျဖးေလးျပန္ဆြဲထုတ္လိုက္တယ္ .. ရင္ထဲဟာသြားသလိုပဲ ဒါနဲ႔ ကမန္းကတန္းျပန္သြင္းလိုက္တယ္၊ျပန္ဟာသြားတယ္ ျပန႔သြင္းလိုက္တယ္ အဲျပန္ေကာင္းသြားျပန္ေရာ ..အဲလိုေလး ၁၀ ခ်က္ေလာက္လုပ္လိုက္ေတာ့မတင္က။ “အင္း အင္း ငေဇာ္ ေဆာင့္ ေဆာင့္ ..မတင္ကိုေဆာင့္ေပး”ဆိုၿပီးက်ေနာ့္ဘိက္ကိုအတင္းဆြဲေတာ့။
က်ေနာ္လည္းသာသာေလးဆြဲထုတ္လိုက္သာသာေလးထိုးသြင္းလိုက္နဲ႔က်ေနာ့္လီးကမတင္ေစာက္ဖုတ္ထဲဝင္လိုက္ထြက္လိုက္ …ဝင္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာမတင္ဆီက အင္းဆိုၿပီးထြက္လာတဲ့သာသာယာယာတိုးတိးတိတ္တိတ္အသံဟာက်ေနာ့္နားထဲမွာ ေမဆြိအသံထက္ပိုနားေထာင္ေကာင္းေနသလိုလို .. မတင္က တအင္းအင္းနဲ႔။ က်ေနာ္ထိုးသြင္းတိုင္း အင္း တစ္လုံးက ပါးစပ္ကထြက္ထြက္လာတယ္ခဏေနေတာ့ ..”ေဆာင့္ေဆာင့္ ငေဇာ္ ျမန္ျမန္ေဆာင့္မတင္ၿပီးေတာ့မယ္ ….. ျမန္ျမန္ေဆာင့္လိုး”ဆိုေတာ့ က်ေနာ္လည္းအရိွန္ျမႇင့္အေဆာင့္သူကလည္းအၿပီး က်ေနာ္လာ္းအၿပီး အခ်ိန္ကိုက္ပဲ.. ၿပီးေတာ့သူက….. က်ေနာ့္လက္ကိုဆြဲၿပီးသူ႔ကိုယ္ေပၚဆြဲခ်ၿပီးသာ့ေျခေထာက္ ၂ ေခ်ာင္းကက်ေနာ့္ခါးကိုအတင္းခြထားတာပါပဲ .. ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာပထမဆုံးအႀကိမ္ လိုးဖူးျခင္းပါဘဲ ….. ၿပီ
Categorized as အင်းဆက် Tagged အံဝင်ဂွင်ကျ